सायद थाहा छैन जो थियो वल्ट मानिस पाउनुहुनेछ डिज्नी। वर्ण आफ्नो प्रेम कार्टून र छोराछोरी, र वयस्क को। तिनीहरूले व्यक्तिगत चरित्र, आफ्नो व्यवहार, जीवनको बारेमा विचार छ कि ती ध्यान आकर्षित। तर मुख्य सुविधा मान्छे अक्षरहरू गल्ती, केही देख, र सधैं एक विकल्प सामना छ। जीवन अगाडि तिनीहरूलाई जान्छ र विकास।
आफ्नो शिल्प को एक साँचो मास्टर वल्ट डिज्नी थियो। वर्ण लेखिएका छन् भने कलाकार गरेको ब्रश रूपमा - उज्ज्वल, सुन्दर, मौलिक। उहाँले, स्मृति मा लामो Linger गर्ने विशिष्ट वर्ण को एक नम्बर सिर्जना सबैभन्दा सुखद भावना र भावना पैदा। दर्शक भावना बुझ्न गर्न विश्लेषण गर्न, सिक्ने सोच्न, घटना तिनीहरूलाई अनुभव गरिरहेको छ। साँच्चै अद्वितीय, यी कार्टून वर्ण। डिज्नी ध्यान दिएर र विशेष हेरविचार तिनीहरूलाई सिर्जना गर्न।
राजा Mufasa छोरा - "सिंह राजा" Simba को कार्टून को मुख्य नायक। उहाँले मात्र र प्रिय बच्चा छ। पिता, प्रकृति हकदार ध्यान राखिदिन सबै जीवित कुराहरू प्रेम खोज्छ। Simba Nala एक प्रेमिका छ। शावक सँगै खेल्न प्रेम। Simba आफ्नो बुबाको काम जारी राख्न र राजा बन्न भविष्यमा सम्म बढ्दै सबै चरणमा मार्फत जाने छ। अचानक Mufasa मर्छ। Simba अझै पनि यो चाचा निशान राजाको स्थान लिन सबैभन्दा ठूलो दुःखद घटना समायोजित थियो थाहा छैन। भयो कुरा गरेर स्तब्ध तिनका मामा को प्रभाव अन्तर्गत बच्चालाई, स्वैच्छिक कैदमा जान्छ, र निशान, बीच, आफ्नो विजय celebrates। अफ्रिकी Savannah सिंह उसलाई हानि हटाउन मदत गर्ने नयाँ मित्र, Timon र Pumbaa, भेट्न व्याकुल को ठूलो expanses मा।
Simba एक वयस्क सिंह मा अप बढ्छ। तथापि, उहाँले जिम्मेवारी, को स्वतन्त्रित मजा मा धेरै समय लिइरहेको गर्न accustomed थियो: गीतहरू गाइरहेका प्रकृति को सुन्दरता को प्रशंसा, चन्द्र देख, सपना प्रेम गर्नुहुन्छ। अचानक उहाँले Nala पूरा र उनको अचेत प्रेम पर्छ। एक मित्र, घर फर्कन उसलाई भनिएको वरिपरि शान निशान नेतृत्व छ जीवन कसरी कठिन बताउँछ। Simba गहिरो रिसाउँछन् सुने र फर्कन निर्णय गर्छ। बाटो साथ उहाँले सही राजाको स्थान लिन कि, डर र दोषी आफ्नो लामो समय घर गरौं गर्दैन सम्पर्क गर्न रूपमा आफ्नो शङ्का हटाउन पर्छ। त्यो सिर्जना Uolt डिज्नी यस्तो अद्भुत वर्णको। "सिंह राजा" को कार्टून को वर्ण तिनीहरूले प्रशंसा गर्दै विश्वास वास्तविक हो प्रेम।
Balto मात्र आधा ब्वाँसो थियो - आमा। उहाँले fondly भन्दै, ब्वाँसो सम्झना "यो रूपमा हिउँ जस्तो सेतो थियो।" Balto जीवनमा आफ्नो स्थान फेला पार्न चाहन्छ। उहाँले दोहन मा वरिपरि चलिरहेको कुकुर अनुकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ। Balto पनि दौड जित्छ भएपछि, तर मानिसहरूले उसलाई विश्वास गर्न इन्कार गर्छन्। Laika Gena उहाँलाई लागि सहानुभूति देखाउन, र जवान ब्वाँसो त्यो आफ्नो वफादारी प्रमाणित गर्न चाहन्छ। सबै एक्लै, त्यो कमाल प्रदर्शन गर्न एक खतरनाक यात्रा मा जान्छ। आफ्नो उद्देश्य - समय मृत्यु भ्यागुते रोग बच्चाहरु देखि सुरक्षित गर्न लागूपदार्थ उद्धार गर्न।
साना मत्स्यस्त्री Ariel
यो प्रेम को एक हृदयस्पर्शी कथा, जो कोहीले indifferent छोड्न सक्छन् जो छैन। एरियल राजा ट्राइटन को छोरी पतन, जिद्दी र जानाजानी केटी छ। पिताले सम्भव खतरा तिनीहरूलाई रक्षा गर्न चाहन्छ किनभने, धेरै टाढाबाट देखि पनि, मान्छे हेर्न उनको नगर्नू। तर Ariel त्यो घर बाट र परिणाम राजकुमार एरिक संग भेट रूपमा टाढा चल्छ, छैन सुने भइरहेको छ। जवान मानिसहरू बीच त्यहाँ आपसी आकर्षण, Ariel छ र चाँडै एक वास्तविक केटी बन्न मात्र आफ्नो संसारमा प्रवेश गर्न, आफ्नो जीवनको आधा दिन तयार हुन्छिन्।
त्यो एक चुडैल को मद्दत खोज्ने, र एक मानिस बन्ने मौका लागि विनिमय एक सुन्दर आवाज दिन्छ। हेर्ने को पहिलो मिनेट कब्जा त्यस्तो एक रोचक कथा, सिर्जना गर्न सकिन्छ मात्र डिज्नी Uolt। वर्ण यो कार्टून प्रेम हामीलाई त यस्तै, साधारण मान्छे,।
बाल्यकाल देखि उहाँले अन्य हात्ती विशाल कान फरक थियो। तिनीहरूले पनि वयस्क हात्ती, यसलाई चोट, अपमानित, उसलाई हाँसिन्। सबैलाई गिल्ला मात्र वस्तु यो देखे। केवल एक आमा devotedly उहाँलाई प्रेम र सुरक्षा गर्न हरेक तरिकामा खोजे। हामी बाँध यो अर्थ के अरू सबैलाई जस्तै हुन गर्न कठिन बाटो अनुभव छ भनेर भन्न सकिन्छ। एक रहस्यमय मामला र न्यानो समर्थन अन्य माउस उहाँलाई आफ्नो वर्तमान स्थिति मा मर्यादा हेर्न विभिन्न आँखाले अवस्था हेर्न मदत गरे। केही बिन्दुमा Dumbo आफैलाई लागि खेद महसुस रोकियो र आफ्नो क्षमताहरु केन्द्रित। यस साँच्चै ठूलो कान उहाँलाई प्रत्यक्ष र अन्यथा यो प्रतिबन्ध रोकियो, तर अब त्यो उड गर्न सिकेका छ अघि भने।
यसको आफ्नै अविस्मरणीय मा र मूल सबै कार्टून वर्ण। जवान मृग, Bambi कथा - डिज्नी पनि विशेष गरी प्रहार गर्ने एक काम सिर्जना गरियो। उहाँले परीक्षण को एक कठोर बाटो आध्यात्मिक तवरमा बलियो बन्न थियो। एक बच्चाको रूपमा उहाँले आफ्नो आमा गुमाए र यो बिना बाँच्न सिक्न थियो। कठिन र पीडादायी परीक्षा को एक श्रृंखला आफ्नो चरित्र स्वभावका। यो कथा देख एक बच्चा, नायक भावना बुझ्न हुनेछ।
त्यसैले, एनिमेशन को एक महान कलाकार वल्ट डिज्नी थियो। आफ्नो कार्टून मा वर्ण, प्रेम र यसका सबै manifestations जीवन बुझ्न सिकाइएको उहाँको वरिपरि सबै गर्न ध्यान grafted छ। तिनीहरूलाई देख, तपाईं समझदार, kinder र थप सहानुभूति हुन्छन्।
एक वर्ष मुनिका आमाबाबुले छोराछोरीलाई लागि शैक्षिक कार्टून मद्दत गर्न
सिनेमा र जीवनी: पीओएल Makgigan द्वारा निर्देशित
Mashkov राम्रो फिल्म। Filmography Vladimira Mashkova
Ismail नाम: मान, गोप्य विशेषताहरु, र भाग्य
मास्टर वर्ग, एक टोकरी मड्यूलर ओरिगेमी कसरी बनाउने
नयाँ Renault प्रतीक। समीक्षा मालिक र कार समीक्षा
चिकित्सा 'Clonazepam'। प्रयोगको लागि निर्देशन
लहरे खोकी: लक्षण, उपचार, रोकथाम। लहरे खोकी: कसरी व्यवहार गर्ने?
केक "Gossamer" कसरी खाना पकाउनु? फोटो संग चरण नुस्खा द्वारा चरण
यसलाई गर्भवती गैर-रक्सी पिउने बियर लागि सम्भव छ
खरीद देवू Matiz: मोडेल को मालिक को समीक्षा, लाभ र बेफाइदा
Vorontsov डेनिस - रूसी सिनेमा भविष्य
फ्रान्समा, कर्मचारीहरूलाई सामान्य सामान्य बाहिर कामका लागि एसएमएस कर्मचारीहरूलाई लेख्न अनुमति छैन